Ebe egwuregwu | Gaa na Hultsfred
Mgbe ụkwụ gị jupụtara na ịgba ọsọ na igwu egwu!
N'agbanyeghị ihu igwe na oge, a na-enwekarị obi ụtọ ịga leta ebe egwuregwu. E nwere ọtụtụ ogige ọrụ ọhụụ emere ọhụụ nwere oghere maka egwuregwu na echiche.
Ama egwuregwu Silverdalen - ebe egwuregwu na ihe ọjọọ! Ngwaọrụ na ebe nkiri Swings Combi na-akpọ Sandbox Anụ Mmịkpọ mpaghara Picnic tebụl (emegharịrị nnweta)
Gwuo gburugburu na ebe egwuregwu Mörlunda - ebe a bụ ihe na-atọ ụtọ ịchọpụta! Ngwaọrụ na ebe nkiri Na-arịgo osisi Egwuregwu maka obere ụmụaka Swings